China Polyethylene Glyeol 1000 mveliso kunye nabenzi | Yinuoxin
Izicelo eziphambili: Amafutha, suppositories, cream.
Umxube ofanelekileyo we-polyethylene glycol unendlela ethile yokuncamathisela (njenge-PEG300 kunye ne-PEG1500 ngomxube olinganayo), ezi zinto zibenza bonwabele ukunyibilika kwamanzi okungcono kunye nokuhambelana kakuhle nezinye iziyobisi, ukuze isetyenziswe njengeoyile .
Indlela yokupakisha: Igubu leplastiki le-50kg
Ukugcinwa kunye nokuThuthwa: Le mveliso ayinabutyhefu, ilinda idangatye, njengokuthunyelwa ngokubanzi kweekhemikhali, zitywinwe kwaye zigcinwe kwindawo eyomileyo.
I-Polyethylene glycol (isikhonkwane) luhlobo lweekhompawundi, ifomula yamachiza yi-HO nH (CH-CH-O), uthotho lweemveliso, incasa ekrakra, enokunyibilika okuhle emanzini, kunye nokungahambelani kakuhle nezinto ezininzi eziphilayo. Zisetyenziswa ngokubanzi kwizithambiso, amayeza, ifayibha yemichiza, irabha, iplastiki, ukwenza iphepha, ipeyinti, ielectroplating, isibulala-zinambuzane, ukuqhubekeka kwesinyithi kunye nemizi-mveliso yokulungisa ukutya ngenxa yokuthambisa kwazo, ukufuma, ukusasazeka, ukubambelela, iiarhente ze-antistatic kunye nezithambisi.
I-Peg-1000, i-PEG-1500: isetyenziswa njenge-substrate okanye i-lubricant kunye ne-softener kumzi mveliso wamayeza, wempahla kunye nowezithambiso; Isetyenziswa njenge sisasazeka kushishino ukutyabeka ukuphucula ukusasazeka kwamanzi kunye nokuguquguquka kwentlaka, ngesixa esili-10-30%; I-inki ingabuphucula ubuchule bokunyibilikisa idayi, ukunciphisa ukungahambelani kwayo, kwiphepha le-wax kunye ne-inki yepad ilunge ngakumbi, kodwa nakwinki yebhola yokulungisa i-viscosity ye-ink; Kwimveliso yerabha njengesixhobo esasazekayo, khuthaza isenzo se-vulcanization, njengekhabhoni emnyama yokugcwalisa isasazi.
Izicelo kwi-biology ye-molekyuli: I-PEG inokubangela ukudityaniswa kwee-macromolecule kwizisombululo ezinamandla. Inokusetyenziswa okuninzi ekwenziweni kwemolekyuli, kubandakanya: 1. 2. Nciphisa kwaye uhlambulule amasuntswana efage; 3.Ukunyusa ukusebenza ngokukuko kweekhonco zeasidi ye-asidi kwi-hybridization, uqhagamshelo olusisicaba lweemolekyuli zeDNA kunye nelebheli yesiphelo seDNA eneT4 polynucleic acid kinase. 4. Ukuhlanganiswa kweeprotoplast zeeseli okanye ibhaktheriya.
Egqithileyo I-PEG 600 Polyethylene Glyeol 600
Okulandelayo: IPolyethylene Glyeol 1500